Manchester City Oo Guul Dirqi Ah Ka Gaadhay Arsenal Iyo Raheem Sterling Oo Culayska Ka Dejiyey Guardiola – Laacibnet.net
Manchester City Oo Guul Dirqi Ah Ka Gaadhay Arsenal Iyo Raheem Sterling Oo Culayska Ka Dejiyey Guardiola
Manchester City ayaa guul cidhiidhi ah oo ay ku rafaadday ka gaadhay Arsenal oo ay kusoo dhoweysay garoonkeeda Etihad Stadium, waxaanay kusoo laabatay jidka guusha kaddib laba ciyaarood oo midna laga badiyey midna ay barbarro galeen.
Manchester City oo uu ka maqnaa xiddigooda Kevin de Bruyne ayaa soo bandhigtay ciyaar wanaagsan oo ay saddexda dhibcood kaga qaadatay Arsenal oo ciyaartoygeeda afka hore aanay si fiican u shaqaynayn kaddib isbeddello badan ee oo uu Arteta ku sameeyey xiddigihiisa.
Daqiiqaddii 23aad ee ciyaarta ayuu Raheem Sterling dhaliyey goolka kaliya ee ciyaarta ka dhashay ee guushana u horseeday kooxdiisa Manchester City, waxaanay Citizens yeelatay siddeed dhibcood oo ay ka urursatay afartii ciyaarood ee horyaalka Premier League ee ay illaa hadda ciyaartay, halka Arsenal ay leedahay sagaal dhibcood.
Kaydka: Thomas Partey, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette, Runar Alex Runarsson, Mohamed Elneny, David Luiz, Eddie Nketiah.
Kaydka: Zack Steffen, Fernandinho, Ferran Torres, Liam Delap, Eric García, John Stones, Ilkay Gundogan.
Guardiola ayaa afar beddel ku sameeyey safkii uu kula ciyaaray Leeds United kulankii ugu dambeeyey ee 1-1 kusoo dhamaaday. Kevin de Bruyne oo dhaawac ah ayaan joogin, sidoo kalena Sergio Aguero ayaa muddo dheer kaddib yimid.
Laakiin Mikel Arteta ayaa dhinaciisa filashadii taageereyaasha aan rumaynin, waxaanu kaydka kusoo bilaabay Thomas Partey oo ay dad badan sugayeen inay arkaan kulankan iyadoo uu ka door biday Xhaka.
Ciyaartoyda labada kooxood ayaa jilibka dhulka dhigay si ay usii wadaan dagaalka ka dhanka ah sinnaan la’aanta iyo faquuqa jira.
Manchester City ayaan dareemin maqnaanshaha kubbad-sameeyahooda Kevin de Bruyne waxaanay daqiiqadihii ugu horreeyey ba awood u yeelatay inay jiibta iyo jaanta isla hesho, isla markaana ay awooddeeda iskugu geyso khadka dhexe, halka weerarkana uu Sterling ahaa khatar ay kaashanayeen Aguero iyo Mahrez.
Daqiiqaddii 23aad ayay Manchester City hoggaanka ciyaarta qabatay, waxaana kubbad uu soo tufay goolhaye Leno dib ugu celiyey goolka Raheem Sterling oo shabaqa taabsiiyey.
Arsenal ayaa heshay fursado ay ugu cadcaddaayeen mid uu xerada ganaaxa horteeda goolka kaga toogtay Saka laakiin birta dul martay, waxaanay qaybta hore kusoo dhamatay 1-0 ay Manchester City hoggaanka ciyaarta la nasatay.
Mikel Arteta ayaa ciyaarta beddel ku keenay Alexandre Lacazette, waxaanu bannaanka dhigay Willian, waxaana uu weeraryahanka reer France isbeddel ku keenay shaqada afka hore ee kooxdiisa inkasta oo Aubameyang uu ahaa sidii go’doon aan sidii hore u shaqaynayn.
Difaaca reer Brazil ee David Luiz ayaa isku qabtay kubbad sigtay inay shabaqaiisa gasho, waxaana u jirsatay cabbirro yar iyadoo aanu waliba Leno u diyaarsanayn.
Xilli dambe ayuu Mikel Arteta soo geliyey saxeexii la sugayay Thomas Partey laakiin waqti uu ciyaarta isbeddel ku samayn karo may ahayn.
Daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayay Arsenal soo qaadday weeraro culus oo ay ku ekaysay goolka Manchester City, laakiin dedaalkooda waxba kamay soo bixin.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday Manchester City.